PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: February 2014
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မထိန်းပါက ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲနို...
တအာင်းတပ် ၃၆၇ နှင့် မြန်မာတပ် ၅၀၆ တို့ တိုက်ပွဲဆက်...
(၆၆)နှစ် မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား(တိုကျိ...
ကချင်ပြည်နယ် တကျော့ပြန် ထိုးစစ်ပြင်းထန်လာ ... (BBC...
ဘားအံ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ညီလာခံ မတ်လရွှေ့ဆိုင...
"ဒီဒုက္ခသည်တွေဟာ ဒေသတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ စစ်ပွဲတွေကြောင့် အိုးအိမ်တွေကို စွန့်ခွာပြီး ဘေးလွတ်ရာကို ထွက်ပြေးခိုလှုံဖို့ ရောက်လာကြတဲ့သူတွေပါ၊ ဒါပေမယ့် ကူညီမယ့်သူတွေမရှိတော့ အဟာရ မလုံလောက် တာ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်လျှောက်မှု မရတာနဲ့ ဒုက္ခတွေကို အဆင့်ဆင့် ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်" လို့ TWO
Posted by PNSjapan at 12:23 PM0comments
တအာင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (PSLF/TNLA) ၏ စစ်ဗျူဟာ (၂) မှ တပ်ရင်း (၇၁၇) တပ်ဖွဲ့များ သည် ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ကျောက် မဲမြို့နယ် ပန်းဖြတ်ကျေးရွာ ၌ ခေတ္တ ညအိပ် ရပ်နားနေစဉ် ယနေ့ မနက်ပိုင်း (၁၀) နာရီကျော် တွင် အစိုးရ တပ်များမှ လျှပ်တပျက် ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် (၁၀)မိနစ် ခန့်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားရာ ကျေးရွာ အတွင်း ရေးမှူး တဦးသေ ဆုံးပြီး ရွာသား (၃)ဦး ဒါဏ်ရာရှိသည်ဟု တအာင်း ပြန်ကြား ရေးဌာနက သတင်း ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါ သည်။
“ ရွာထဲကို လက်နက်ကြီး ပစ်သွင်းလိုက်တာပါ။ အတွင်းရေး မှူး အိမ်ပေါ်ကိုကျတယ်။ ဒီတော့ အတွင်းရေးမှူး ဦး ကျော်လူ သေဆုံး ပြီး အရပ်သား (၃)ဦး ဒါဏ် ရာ ရသွားတာပေါ့။ အပြန်အလှန် ပစ်လိုက်ပေမဲ့ ကျနော်တို့ ပလောင် တပ်က ချက်ခြင်း ဆုတ်ပေး လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ တပ်မ(၇၇) စစ်ကြောင်း က လို့ နောက်မှ သိရတယ်။ ပြီးတော့ ရွာသားတွေကို စုလိုက်တယ် ထွက်ပြေးရင် သူပုန်နဲ့ ဆက်သွယ်အားပေးရင် အားလုံးကို သတ်ပစ်မယ်။ တရွာလုံး ကိုလည်း မီးရှို့ပစ်မယ် ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက် နေတယ်။ ” ဟု ကျောက်မဲ မြို့ပေါ်ရှိ TNLA ဆက်သား တဦးက ဆိုပါသည်။
အဆိုပါ တပ်မ (၇၇) စစ်ကြောင်းများ သည် ပန်ဖျတ်၊ ပန်ကွမ်၊ ပန်စပေ ကျေးရွာများ တွင် ဆက်လက် စခန်းချ နေပြီး ထပ်မံ စစ်ဆင်ရန် ရှိပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားရန် ရှိပါသည်။
TNLA တို့သည် ဗျူဟာ (၃) ခုဖွဲ့ကာ မူးရစ်ဆေး ၀ါး တိုက်ဖျက်မှု စစ်ဆင်ရေး အတွက် လှုပ်ရှားနေ ပါသည်။ ယင်းစစ် ဆင်ရေးသည် ပြီးခဲ့သည့် ဇန္နာဝါရီ လကုန် ပိုင်း စတင်ခဲ့ပြီး ဘိန်းခင်း ဧက (၅၀၀) ထက်မနဲ ဖျက်ဆီး နိုင်ခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲ လည်း အဆက် မပြတ် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
တိုက်ပွဲများ ရက်ဆက် ဖြစ်ရာ တွင် ယမာန်နေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၂၆) ရက်နေ့ ၌ (TNLA) ဗျူဟာ (၃) နှင့် အစိုးရ တပ်မ (၇၇) စစ်ကြောင်း တို့ ဖြစ်သော တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရဖက်မှ အကျအဆုံး များသည်ဟု TNLA ဖက်မှ ဆိုပါသည်။ အ လားတူ ဖေဖေါ် ၀ါရီ (၂၄) ရက်နေ့ တွင်ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း နမ်ခမ်း မြို့နယ် ပန်ဆေး
Posted by PNSjapan at 12:13 PM0comments
(ဓါတ်ပုံ -တာမုံးညှဲ ဒေသရှိဘိန်းခြံ များအား ၂၀၁၄ ၌မြင်ရပုံ။)
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ၊ တာမုံးညှဲ ဒေသရှိ ဘိန်းစိုက်ပျိုးသော တောင်သူများထံမှ နယ်မြေခံ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်အတွက် ရွာတစ်ရွာ လျှင် မြန်မာ ကျပ်ငွေ သိန်း (၃၀) ပေးဆောင်နေ ရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ၄င်းငွေ များအား တာ...မုံးညှဲ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ပြည့် နှင့် နယ်မြေခံရဲ များက ဒေသခံ ရွာသားများထံ မှ လိုက်လံ ကောက်ခံ ပေးနေ ကြောင်းဒေသခံရွာသားများထံ မှ သတင်းရရှိပါသည်။
ထို့ အပြင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ၄င်းရဲများ သည် ရွာသားများ မိမိတို့၏အိမ်တွင် ထမင်း ချက်စားရန်အတွက် တနိုင်စာ သယ်ဆောင်လာသော ထင်းများအား လမ်း၌ ခြိမ်းခြောက် ကာ လုယူပြီး ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ရဲများက ၄င်းထင်းများအားတဆင့် ပြန်လည် ရောင်းစားနေ ကြ ကြောင်း ရွာသားများထံ မှ ထပ်မံ
တအန်းဒေသသို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် မြန်မာတပ်မ (၇၇) နှင့်တိုက်ပွဲတွင် တပ်မ(၇၇)မှ အနဲဆုံး ၁၀ ဦးကျော် ကျဆုံး
၂၆ ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၄
တအန်းတပ်မတော်အခြေခံစစ်နယ်မြေအား ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်မ (၇၇) စစ်ကြောင်းနှင့် တအန်းတပ်မတော်၏ ဗျူဟာ (၃) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၃၆၇) တပ်ဖွဲ့တို့ မိုးမိတ်မြို့နယ် ရူဗိန်း (ရေပုံး) ရွာအကျော် မန်တုံ-မိုးမိတ်ကားလမ်းမ တွင် ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက် ၁၂း၄၅ နာရီအချိန်ခန့်မှ ၁၃း၁၅ နာရီခန့်ထိ နာရီဝက်ကျော်ကြာ နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ထိုတိုက်ပွဲတွင် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် ရဟန်းသံဃာတော်များကို ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် တပ်မ (၇၇) စစ်ကြောင်းမှ မြန်မာတပ်ဖွဲ့ဝင် အနဲဆုံး (၁၀) ဦးကျဆုံးပြီး အများအပြား ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။ တအန်းတပ်မတော်ဘက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှု မရှိပါ။
အင်အား ၂၀၀ ကျော်ရှိသည့် မြန်မာတပ်မ (၇၇) မှ စစ်ကြောင်း သည် မိုးမိတ်မြို့သို့ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိလာပြီး ထိုမှတဆင့် မန်တုံ-မိုးမိတ် အကြားရှိ တအန်းတပ်မတော် ဗျူဟာ အမှတ်(၃) ကို ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့သည်။ ၁၃း၁၅ နာရီခန့်တွင်တိုက်ပွဲငြိမ်သက်သွားသော်လည်း တပ်မ (၇၇) မှ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်မှုမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော နေပြည်တော်သို့ အမြန်လမ်းမကြီးမှတစ်ဆင့် လာရောက်ပါက ဦးစွာတွေ့ရှိရသော ကံ့ကော်ပန်းအ၀ိုင်းအနီးတွင် လှပခံ့ညားလှသည့် အဆောက်အအုံကြီး တစ်ခုက ဆီးကြိုနေမည်ဖြစ်သည်။
မြေဧကပေါင်းများစွာ ကျယ်ဝန်းသည့် မြေဧရိယာအတွင်း ခေတ်မီဒီဇိုင်းများဖြင့် ဆောက်လုပ် ပုံဖော်ထားသည့် အဆောက်အအုံကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးမားဆုံး ပါတီဌာနချုပ်ရုံး ဟူ၍ပင် ခေါ်ဆိုနိုင်မည့် ငွေကျပ်သန်းပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံတည်ဆောက်ထားသော ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပိုင် ဌာနချုပ်ရုံး အဆောက်အအုံကြီးပင်ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ခမ်းနားလှသည့် အဆောက်အအုံကြီးကို တည်ဆောက်နိုင်သည့် ငွေကြေးပမာဏသာမက ထို့ထက်များပြားလှသည့် ငွေကြေး၊ အဆောက်အအုံ၊ လုပ်ငန်းများ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ပါတီကြီး၏ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုများသည် မည်ကဲ့သို့ ရရှိလာပါသနည်းဟူသော မေးခွန်းမှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလများတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအနေဖြင့် မဖြစ်မနေဖြေရမည့် ၂၀၁၀ ကပင် တင်ကျန်ခဲ့သည့် မေးခွန်းကြွေးဖြစ်သည်။
အသင်းပိုင် အဆောက်အအုံများ၊ ငွေကြေး၊ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ယခင်အစိုးရက ပြည်သူများ ပိုင်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းငွေကြေး၊ ဘဏ္ဍာများကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ ယခုလက်ရှိ ပါတီပိုင်ဖြစ်နေသော ဓနဥစ္စာများသည် ပြည်သူပိုင်များပင် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသူအချို့က ဝေဖန်ပြောကြားသည်။
ထိုအချက်ကို လွှတ်တော်အတွင်းရောက်ရှိနေသည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအား မေးမြန်းသော်လည်း ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
မကြာမီနှစ်အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်တော့မည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဦးမည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေဖြင့် ပါတီပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းဇယားများနှင့် မည်ကဲ့သို့ရရှိလာသည်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထုတ်ပြန်မှသာ ပြည်သူများ၏သံသယများကို ဖြေဖျောက်နိုင်ပြီး လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒရှင်များ
လျှစ်လျူရှုခံ အကြပ်အတည်းများ" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီကနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
တအာင်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းက သူတို့ဒေသတွေက အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ ဒုက္ခသည် IDP တွေအကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ အစီရင်ခံစာတစောင်ကို " လျှစ်လျူရှုခံ အကြပ်အတည်းများ" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီကနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီး ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ RFA အဖွဲ့သူ မသင်းသီရီက တင်ဆက်ထား ပါတယ်။
တအောင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းမှ လျစ်လျူရှူခံ အကြပ်အတည်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်း
တအောင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းသည် ပလောင်လူမျိူးများ၏ စစ်ဘေးဒုက္ခများ ခံစားနေရသော အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ လျစ်လျူရှူခံ အကြပ်အတည်းဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ရက်က ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ တော်ဝင် နှင်းဆီခန်းမတွင် ရှင်းလင်းသွားခဲ့သည်။
တအောင်းအမျုိးသမီး အဖွဲ့အစည်း၏ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၂)ဖြစ်သူ မလိုည်းပိုးငယ်က “အခုချိန်ဟာ အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့စီးမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဗမာစစ်တပ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးသင့်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂၀၁၂ခုနှစ်နောက်ပိုင်း စစ်ပွဲတွေ ပိုမိုပြင်းထန်လာတော့ ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ အိုးအိမ်ကိုစွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရတာကို တွေ့ရတယ် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ပဲ နေထိုင်နေရတယ် လွှတ်လပ်မှုဆိုတာ အခုချိန်ထိမရသေးဘူး အစိုးရက ပြည်သူတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကို နားထောင်သင့်ပါတယ် အခုစစ်ဘေးဒဏ်ဒုက္ခတွေ ခံစားနေရတဲ့ ပလောင်လူမျိုးတွေဟာ ပုံမှန်ထောက်ပံ့မှုလည်း မရဘူး၊ ဒီတော့ အစားအသောက်အတွက်လည်း အရမ်းခက်ခဲတယ် ပလောင်လူမျိုးတွေဟာ လက်ဖက်စိုက်ပျိုးခြင်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကျတာဖြစ်လို့ မတ်လမှာ လက်ဖက်ဖွင့်တဲ့ ရာသီဖြစ်တယ် ဒီတစ်လအတွင်းမှာ လက်ဖက်ခူးဖို့ အခွင့်အရေး မရဘူးဆိုရင် တစ်နှစ်လုံးစာ အတွက် ဒုက္ခခံရဖို့ရှိနေတယ် ဒီအတွက် အစိုးရဖက်ကနေ ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကို ရပ်တန့်ပေးဖို့လိုပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း တအောင်း(ပလောင်)ဒေများတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှ စ၍ စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပလောင်ပြည်သူလူထု ထောင်ပေါင်းများစွာသည် ပြည်တွင်း စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်း ပလောင်ပြည်သူလူထုများသည် စစ်ဒဏ်ကြောင့် သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ပေါ်တာဆွဲခြင်း၊ အိုးအိမ်များ ပျက်စီးရခြင်း၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးငယ်များ မုဒိန်းကျင့်ခံရခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ယူကရိန်းသမ္မတ ထွက်ပြေးသွားတော့ နန်းတော်ကြီးလို ခမ်းနားလွန်းတဲ့ စံအိမ်တော်ကြီးကို ပြည်သူတွေ လေ့လာနိုင်အောင်လို့ ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်…
Post by သုံး ရောင် ခြယ်.
ကိုယ်ကျိုးစီးပွါးအတွက် ခရိုနီတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ချမ်းသာနေတဲ့ သမ္မတကို ပြည်သူတွေရဲ့ အားနဲ့ ဖြုတ်ချနိုင်ဖို့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ လူထုအုံကြွမှုတွေ၊ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်စေမှုနဲ့ လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြတယ်…
ကျုပ်တို့ ပြည်သူတွေအတွက် အတုယူစရာဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး…...
အနာမခံချင်ရင် အသာစံဖို့ အခွင့်အရေးမရှိဘူး…
ကျုပ်တို့ နိုင်ငံအခြေအနေက ယူကရိန်းထက် အဆပေါင်းများစွာ ဆိုးရွားပါတယ်…
ဖွဲ့စည်းပုံ မပြင်ချင်လို့ ပြည်သူတွေကို အမျိုးမျိုး နှိပ်စက်နေတဲ့ အစိုးရဟာ ဖွဲ့စည်းပုံသာ ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ခွေးဘဝရောက်တာထက် ဆိုးလိမ့်မယ်ဆိုတာ အာဏာရှင်တွေနဲ့ ခရိုနီတစ်စု သိနေကြလို့လည်း ကျုပ်တို့ ပြည်သူတွေကို ဒီလို မတရားမှုတွေနဲ့ ပြဿနာတွေက်ို ဖန်းတီးပေးနေခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်…
စစ်အာဏာရှင်ကျွန်ဘဝက လွတ်မြောက်ဖို့ ပြည်သူတွေ ညီကြပါ………
တအာင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက် ရေးတပ်မတော် (TNLA)မှ ဗျူဟာ (၁) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၁၁၂) တပ်ဖွဲ့ နှင့် အစိုးရ ခလရ (၄၅ နှင့် ခလရ ၁၂၃) ပူး ပေါင်း စစ်ကြောင်းတို့ နမ် ခမ်းမြို့နယ် ပန်ဆေး ဒေသရှိပန်ပေး ကျေးရွာ အနီး (နမ့်ခမ်း နမ့်ဖက်ကာ ကားလမ်း မဘေး ) တွင် ယနေ့ ဖေဖော် ဝါရီလ၂၄ ရက် နံနက် ၁၁နာရီ ၄၅ မိနစ် အချိန်တွင် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ စတင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်ဟု TNLA ပြန်ကြား ရေးဌာနက ဆိုပါသည်။
တိုက်ပွဲသည်နေ့လည် (၂)နာရီအထိ လက်နက် ကြီးများ ပစ်ခတ်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ တအာင်း တပ်ဖွဲ့တို့သည် ပန်ဆေး ပြည်သူ့စစ်လက် အောက်ခံ ပန်ပေးပြည် သူ့စစ်တို့ စိုက်ပျိုးထား သည့် ဘိန်းခြံများ အား လိုက် လံဖျက်ဆီးစဉ် အစိုးရ တပ်များနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
အလားတူ (TNLA) တပ်ရင်း (၂၅၆) တပ်ဖွဲ့သည် အစိုးရ ပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့များ နှင့် ယမာန်နေ့ နေ့လည် တနာရီ (၄၅)မိနစ် မှ (၂)နာရီခွဲ အထိ နမ့်ဆန်မြို့နယ် ရူ မန်းကျေးရွာ အနီးတွင် တိုက်ပွဲဖြစ် ပွား ခဲ့ကြောင်း TNLA ပြန်ကြားရေး ဌာနမှ သတင်း ထုတ်ပြန် ထားပါသည်။
ယင်းတိုက် ပွဲတွင် အင်အား (၁၀၀) ကျော်မည်ဟု ခန့်မှန်းထား သည့် အစိုးရ ခမရ (၁၇) တပ်ဖွဲ့ နှင့် ရှမ်းပြည် မြောက် ပိုင်းနန့်လန် အခြေစိုက် အမှတ်(၁) စစ် ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ်မှ ခမရ ၅၀၅ စစ်ကြောင်း တို့ နှင့်ရင်ဆိုင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ခိုက်ရာ တွင်လည်း အစိုးရ တပ်များသည်
သံလွင်အရှေ့ခြမ်း၌ အစိုးရတပ် နှင့် RCSS/SSA တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်
၂၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၄
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ တပ်စခန်းအားဖယ်ပေးရန် အစိုးရတပ်တောင်းဆိုမှုကို သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA က လိုက်လျောခြင်းမရှိသောကြောင့် ယမန်နေ့က ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ သည်ဟု RCSS ပြောခွင့်ရ က ပြောပါသည်။
“မိုင်းပန်ကနေ တာ့ဆွပ်ပတ်ကူးတို့ဆိပ်ကူးပြီး တက်လာတဲ့ စစ်ကြောင်း မနေ့က မွန်းလွဲပိုင်း ၃ နာရီ ကနေ ၆ နာရီ အထိ လွယ်လိတ်စီးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ အခုလဲ လွယ်ပန်းတုန်းမှာလဲ နှစ်ဘက် ချိန်နေတယ်” ဟု ပြောခွင့်ရ စိုင်းဆိုင်မိဏ်း ကပြော သည်။
မိုင်းပန်မြို့မှ သံလွင်မြစ်ကူး၍ နယ်စပ်ဘက် ဦးတည်နေသည့် မူးယစ်မှောင်ခိုအဖွဲ့အားတားဆီး ရှင်းလင်းနိုင်ရေးအတွက် ဖေါ်ဖေါ်ဝါရီ ၁၅ ရက်မှ စ၍ စစ်အင်အားဖြည့်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ထိုဒေသအတွင်း အခြေချလှုပ်ရှားနေသော အင်အားများအား ဆုတ်ပေးရန် မိုင်းတုံ ဗျူဟာမှူးက RCSS/SSA တပ်မှူးအား အထက်သို့ တင်ပြပေးပါရန် အကြိမ်ကြိမ် လာရောက်တောင်းဆိုကြောင်း
တအန်းတပ်မတော် ၂၅၆ နှင့် မြန်မာတပ်မတော် (၅၀၅ )စစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲတွင် မြန်မာ ၇ ဦးကျဆုံး
နမ့်ဆန်မြို့နယ်အခြေစိုက် တအန်းတပ်မတော် တပ်ရင်း ၂၅၆ နှင့် မြန်မာတပ်မတော် ခမရ ၁၇၊ ၅၀၅ စစ်ကြောင်းတို့ နမ့်ဆန်မြို့နယ် ရူမန်းရွာအနီးတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက် ၁၃း၄၅ နာရီခန့်မှ ၁၄း၃၀ နာရီခန့်ထိ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မြန်မာဘက်မှ အရာရှိတဦး အပါအဝင် အနဲဆုံး ၇ ဦး ကျဆုံးပြီး ၁၀ ဦးကျော် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်းမှစတင်ပြီး မြန်မာတပ်ရင်းစစ်ကြောင်းများ တအာင်းဒေသဖြစ်သည့် နမ့်ဆန်၊ မန်တုံ၊ ကျောက်မဲ၊ မိုင်းလုံ၊ မိုးမိတ်၊ မိုးကုတ်၊ နမ့်ခမ်း၊ ကွတ်ခိုင် ဖက်သို့ ပိုမိုတိုးချဲ့လာပြီး ဆက်တိုက် ပိုက်စိပ်တိုက်
Posted by PNSjapan at 5:00 PM0comments
၁။ ဒါက ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်လာဖို့ သေချာနေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ ဘာကြောင့် ပြောရသလဲဆိုရင် လက်ရှိအချိန်မှာ ပြည်ထောင်စုမဟုတ်ဘူး။ တပြည်ထောင်စနစ်မှာ စစ်တပ်က အတင်းအကြပ်စုစည်းထားလို့ လေအပြည့်ရှိတဲ့ ပူးဖောင်းလေးလို ရပ်တည်နေရတာပါ။ ပေါက်ကွဲလွယ်တယ်။ ပြိုကွဲလွယ်တယ်။
၂။ လူများစုမြန်မာများကို အကောင်းမြင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ နည်းပါးတယ်။ ဒါလည်း ချဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဖွင့်မပြောကြပေမဲ့ သိပ်ကျေနပ်နေကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီမကျေနပ်မှုဟာြ...မန်မာများအတွက် တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ သူတို့အားလုံး မညီမညွတ်ဖြစ်အောင် စစ်တပ်က ဘယ်လောက်ကြာကြာ ထိန်းထားနိုင်မှာလဲ။ ထိန်းမထားနိုင်တဲ့တစ်နေ့ ဒါဟာ တန်ပြန်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
၃။ ဒီအချိန်မှာ ဗမာပြည်နယ်မပါတဲ့ ပြည်ထောင်စုတစ်ခုကို ထူထောင်ကြဖို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများက စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ မိမိလည်း စစ်တပ်က လုံးဝမလျှော့ရင် ဒီအကြံကို ထောက်ခံရမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံးကို UNFC က မထိန်းနိုင်ခဲ့ရင် United States of Ethnic Nationalities တစ်ခု ဖြစ်မလာဘဲ (၃)ခုလောက် ကွဲထွက်ကုန်မှာ စိုးရတယ်။ မွန်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ တနသာင်္ရီကို ပေါင်းပြီး မွန်ကရင်ပြည်ထောင်စုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ရှမ်းစော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ကချင်၊ တအာင်း၊ ကိုးကန့်၊ ဝတို့က သီးခြားပြည်ထောင်စုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ရခိုင်နဲ့ ချင်းကတော့ ဗမာပြည်ထဲမှာ ကျန်နေခဲ့မလား၊ သီးခြားရပ်တည်ကြမလား ပြောဖို့ အချိန်စောသေးတယ်။
သေချာတာတစ်ခုမှာ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အမြဲတမ်း စစ်ရှုံးနေကြမယ်လို့ မထင်ဘူး။ အဲဒီအမုန်းတရားတွေ စုစည်းလာတဲ့တစ်နေ့မှာ လူမျိုးတုံးသုတ်ဖြတ်မှုအချို့ ပြန်ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်။ တပြည်ထောင်လည်း မဖြစ်၊ ပြည်ထောင်စုလည်း မဖြစ် ဖရိုဖရဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်လည်း ရှိတယ်။
ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စုကို ကယ်တင်ဖို့ဆိုရင် ...
၁။ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုတစ်ခုကို ထူထောင်ပါ။
၂။ တန်းတူတဲ့ အမျိုးသားပြည်နယ်များကို ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လက်ခံပါ။
၃။ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို အာမခံချက်ပေးပါ။
မြန်မာတို့နဲ့ တိုင်းရင်းသားတို့ကြားမှာ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်သူဆိုရင် အဖန်ဖန်အခါခါ လိမ်လည်ခဲ့ဖူးတဲ့ စစ်အုပ်စုတွေဟာ အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာ ရှိမနေကြပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ သူတို့ ယုံကြပါတယ်။ စစ်အုပ်စုတွေအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပစ်ပယ်ပြီး တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ထိုးစစ်အရှိန်ကို မြှင့်တင်နေခဲ့ရင် ဒါဟာ ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲရေးလမ်းစလို့ မြင်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုကို ကယ်တင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှိနေဖို့ လိုတယ်။
Posted by PNSjapan at 4:54 PM0comments
ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လူထုဟောပြောပွဲ ဗဟန်းမှာ ကျင်းပ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဖြစ်လာဖို့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ နေရာအများစုရထားတဲ့ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေက လွှတ်တော်တွင်းမှာ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပေးကြဖို့ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမင်းဇေယျာက ဒီနေ့ လူထုဟောပြောပွဲမှာ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ဗိုလ်စိန်မှန် အားကစားကွင်းမှာ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ပြင်ဆင်ရေးဟောပြောပွဲမှာ ကိုမင်းဇေယျာက အခုလို တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။
ဒီနေ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လူထုဟောပြောပွဲမှာ လယ်သမားအရေးဆောင်ရွက်သူ ဦးဝင်းချို၊ မင်းဇေယျာ၊ အလုပ်သမား လယ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်သူ ကိုဝေလုနဲ့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်တို့က ဦးဆောင်ဟောပြောခဲ့ကြပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဆိုပြုထားတဲ့ ကြီးလေးကြီး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုကိုလည်း အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဟောပြောပွဲကို ရွှေညဝါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟကလည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဝဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့ရာမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပိုကောင်းမွန်တဲ့
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ လက်မခံကြောင်း ပြည်သူ့ဆန္ဒအမှန် ထုတ်ဖေါ်ကြပြီ......
Post by Ko Myo Thet Swe.
သျှမ်းတောင်နှင့် မြောက်ကြားဒေသ အစိုးရတပ် အင်အား တထောင် ခန့်ရောက်ရှိ
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းရှူးနှင့် သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့နယ်ကြားရှိဒေသသို့ အစိုးရတပ် များ အင်အားဖြည့်တင်းရောက်ရှိလာသည့်အတွက် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA နှင့် ထိပ်တိုက် ထိတွေ့မှု ဖြစ်ပွားမည်ကို ဒေသခံများက စိုးရိမ်နေကြပါသည်။
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းရှူးမြို့နယ် မိုင်းအောတ်၊ တောင်ဟျိုးနှင့် တန့်ယန်းမြို့နယ် နမ့်လောဝ်း ၊ ၇ မိုင် ဘက် အစိုးရတပ်များ အခြေချရှိရင်းစွဲ စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် (စကခ ၁၇ မိုင်းပန်) လက်ခံတပ်များအပြင် မိုင်းနောင် အခြေစိုက် စကခ ၂ လက်အောက်ခံတပ်များ အင်အားတိုးဖြည့် လာခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊ အဆိုပါဒေသအတွင်း တပ်အပြောင်းအလဲလှုပ်ရှားမှုတွင် စုစုပေါင်းစစ်အင်အား ၁၀၀၀ ထက်မနည်း ရောက်ရှိနေကြောင်း စစ်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက ပြောသည်။
“ဟုတ်တယ် ကျနော်တို့လဲ သိပါတယ်။ စကခ ၁၇ က ရာဂဏန်းက ရှိနေပြီးသား၊ အဲဒီတပ်တွေ နောက် တန်းပြန်ဖို့ထင်တယ်။ စကခ ၂ က အစားလာထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ စစ်ဆိုတာ ယုံလို့တော့မရဘူးလေ။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ဘက်လဲ စစ်ရေးတော့ အသင့် အနေအထား ရှိနေရလိမ့်မယ်။” - ဟု ဌာနချုပ်အရာ
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ဦးတည်တဲ့ ဘားအံ ညီလာခံကြီးအတွက် နှောင့်နှေး ကြံ့ကြာမှုတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လော်ခီးလာ ဆွေးနွေးပွဲတုန်းက တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ အဆိုပြုစာချုပ်ကို အစိုးရဘက်ဆီ ပေးပို့ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အစိုးရဘက်က သဘောထားကို အကြာင်းပြန်ပေးမယ့်ရက်ကို ချိန်းဆိုရာမှာတောင် ရက်တွေ နောက်ဆုတ်ပြီးရင်း ဆုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ လာမယ့် မတ်လ ပထမပတ်မှာ တွေ့ကြမယ်လို့ သိရပါတယ်၊ ရက် အတိအကျရော သိရပါပြီလား၊ တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းရေး NCCT အဖွဲ့ဝင် ဦးခွန်ဥက္ကာကို မေးကြည့်ထားပါတယ်။
တအာင်း အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် အကြပ် အတည်းများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဖိတ်ကြား
လေးစားရပါသောခေါင်းဆောင်များ၊ လူကြီးမင်းများနှင့် သတင်းမီဒီယာများ။
၂၅ ရက်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၄
အကြောင်းအရာ။ ။တအာင်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းမှကျင်းပသော ပြည်တွင်း စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ ၏ အခြေအနေနှ င့်ပတ်သက် သည့်” လျစ်လျူရှုခံ အကြပ်အတည်း“ အစီရင်ခံစာ၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ သို့ကြွရောက် ပါရန် ဖိတ်ကြားခြင်း။
အထက်ပါ အကြောင်း အရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး တအာင်း အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်း မှလာမည့်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ” လျစ်လျူရှု ခံအကြပ် အတည်း“ အစီရင်ခံ စာကို ရန်ကုန်မြို့တွင်ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် လူကြီးမင်း များအားတက် ရောက်ပါရန် လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည်။
တအာင်း အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်း မှ(တအာင်း) ပလောင် ဒေသရှိ ပြည်တွင်း စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် များ၏ အခြေအနေ နှင့်ပတ် သက်ပြီး “လျစ်လျူရှု ခံအကြပ် အတည်း” အစီရင်ခံ စာကို ထုတ်ဝေ သွားမည်ဖြစ် ပါသည်။ ထိုအစီရင် ခံစာ ထဲတွင်ပလောင် ဒေသရှိ ပြည်တွင်း စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ အား တအာင်း အမျိုးသမီး အဖွဲ့ အစည်းမှသွားရောက် တွေ့ဆုံပြီး ထိုဒုက္ခ သည်များ၏ အခြေအနေ အားကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားရောက် မေးမြန်းလေ့လာခဲ့ ပါသည်။
ထိုပြည်တွင်း စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် များသည် ဒုက္ခသည် စခန်းတွင်ကလေးများ ပညာသင်ကြား ခွင့်မရခြင်း၊ အကူအ ညီများ လုံလုံလောက် လောက် မရခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မှု များပြီးဆေးဝါး လုံလောက်မှု မရှိခြင်း၊ အလုပ်လက် မဲ့များ ဖြစ်နေခြင်း စသည့် အခြေအနေ များအပြင် မိမိတို့၏နေရပ်သို့ မပြန်နိုင် ဘဲအနာ ဂတ်မဲ့နေကြ ပါသည်။
တအာင်း အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းမှယခုပို့ ဆောင်ထား သော ဤအစီ ရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ် နှင့် တောင်းဆို ချက်များ သည်ခေါင်းဆောင်များ၊ လူကြီးမင်းများ၊ မီဒီယာများ ကြိုတင်ဖတ်ရှု ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး၂၅ရက်နေ့တွင် အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ဝေဖြန့် ချိမည်ဖြစ် ပါသည်။
ကျင်းပမည့်အချိန်။ ။ ၁၁ နာရီမှ ၁ နာရီအထိ
ကျင်းပမည့်နေရာ။ ။ Royal Rose Restaurant (တော်ဝင်နှင်းဆီစားသောက်ဆိုင်)
NO. ၂၂၁/၂၂၃၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန် ၁၁၂၀၁၊
မြန်မာ။ ။ဖုန်း - ၀၁-၅၄၂၇၂၀ ၊ ၀၉-၃၁၄၅၂၇၈၁
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ။ ၀၉၃၃၄၈၆၆၂၃
မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာ အင်အားတိုးချဲ့မှုနဲ့ မြေယာတွေကို အဓမ္မသိမ်းယူမှုတွေ ဆက်လုပ်နေပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ဖို့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အားနည်းလွန်တာကြောင့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေး တကယ်ပဲ လိုလားရဲ့လားလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်တယ်လို့ အထူးကိုယ်စားလှယ်က
KIA လိုင်ဇာ ဌာနချုပ် ဧရိယာထဲ သို့ အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များ အင်အား ဖြည့်တင်းနေ
ဓါတ်ပုံ - ( KIA)
ယမာန်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ထွက်ခွာသွား သော အစီး တရာခန့်ရှိသည့် အစိုးရ စစ် ယာဉ်တန်း သည် ၀ိုင်းမော် မြို့နယ် ထဲရှိ ကန်တော် ယန်၊နန်ဆန် ယန်နှင့် လိုင်ဇာ ကားလမ်းမ ဘက်သို့ ရောက် ရှိနေသည်ဟု ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) စစ်ရုံးက ဆိုပါသည်။
“ မျက်မြင်တွေ ရဲ့ အပြော ကတော့ အစီးတရာ လောက် ရှိမယ်။ ရိက္ခာတွေ။ တပ်ဖွဲ့တွေ၊ စစ်လက်နက် ခဲယမ်းတွေ ပေါ့ဗျာ တင် လာတာတွေ့ ရတယ် လို့ ပြောကြ တယ်။ ပြီးတော့ ဗန်းမော် လိုင်ဇာ လမ်းကြောင်း ကနေလဲ ကားအစီး (၂၀) ကျော် တက်လာတယ်။ ဆိုတော့ တပ်လဲတာလား။ အားဖြည့်တာလား ဆိုတာ မသဲ ကွဲ သေးပါဘူး။” ဟု ဆိုပါ သည်။
ထို့ နည်းတူ မြစ်ကြီးနားမှ ဆွမ်ပရာဘွမ် လမ်းကြောင်း ဘက်သို့ လည်း စစ်ယာဉ်တန်း အစီး(၁၆၀) ကျော် ထွက်ခွာ သွားကြောင်း။ အဆိုပါ ယာဉ်တန်းတွင် သံ ကိုယ် ထည် ဖြင့်ပြုလုပ် ထားသည့် လှေ အစီးပေါင်း (၅၀)ခန့်ပါကြောင်း ဆို ပါသည်။။
အထူးသဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် ဖါးကန့်နယ်မြေမှ KIA တပ်ရင်း(၆) ဧရိယာထဲ သို့ လည်းတပ်မ အလိုက်ချီတက် ပြီး အင်အား ဖြည့်တင်းနေ သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အစိုးရဖက်မှ စစ်ပြင်ဆင်နေ သည့် အချိန်မျိုး တွင် တရုတ်ကြက် ခြေနီအဖွဲ့ ကလည်း ကချင် ဒုက္ခသည် များကို ကူညီရန် ဒေါ်လာသန်း
၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၄
တအာင်းတပ်မတော် တပ်ရင်း ၃၆၇ နှင့် မြန်မာတပ်မတော် ၅၀၆ တို့ မန်တုံမြို့နယ် လွယ်ကန်နှင့် ကုန်းယောင်းရွာအကြားတွင် ယနေ့ ညနေ ၁၅း၃၀ နာရီမှ ၁၆း၁၅ နာရီခန့်ထိ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မြန်မာ ၅၀၆ စစ်ကြောင်းသည် မန်တုံမြို့ လွယ်ကန်ကျေးရွာမှ စထွက်ကတည်းက လက်နက်ကြီးများ ဆက်တိုက်ထုပြီး တောင်ပေါ် တောတန်းသို့ တက်လာခဲ့သည်။
ထိုနောက်အသင့်စောင့်နေသော တအန်းတပ်တို့နှင့် ညနေ ၁၅း၃၀ နာရီခန့်တွင်စတင်ထိတွေ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဖက် ပစ်ခတ်မှုမှာ မိနစ် ၂၀ ကျော်ခန့် အပြင်းအထန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပစ်ခတ်မှု တဖြေးဖြေးလျော့သွားကာ ၁၆း၁၅ နာရီတွင် လက်နက်ငယ်အသံများတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်ကြောင်းမှ တောင်ပေါ်တောတန်းများဆီသို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခြားတလုံး ရမ်းသမ်းထုနေဆဲဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၈ ရက်နေ့တွင်လည်း မန်တုံမြို့နယ် နမ့်ပါကျိုင်ရွာအနီးတွင် တအန်းတပ် ၃၆၇ နှင့် မြန်မာတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၀န်ကြီးအချို့ ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတက်ရန် ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်မှ တိုက်တွန်း
ယူကရိန်းနိုင်ငံ ကိယက်ဗ်မြို့က အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ
ယူကရိန်း နိုင်ငံက ကိယက်ဗ်မြို့တော်မှာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်း အဆိုးဝါးဆုံး မြင်ကွင်းတွေကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီ အတွင်းမှာတင် တိုက်ကြခိုက်ကြတာတွေကြောင့် လူ ၂၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါပြီ။ အခု အစိုးရက မြို့တော်အတွင်းက အချက်အခြာ အဆောက်အအုံတွေကို ကာကွယ်ဖို့ လုံခြုံရေးတွေ ထပ်ချထားသလို အတိုက်အခံတွေဘက်ကလည်း ဆက်ပြီး ဆန္ဒပြသွားဦးမှာလို့ ပြောနေကြပါတယ်။ သတင်းဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Post by ဆရာ ဟိန်းတင့်ဇော်.
Posted by PNSjapan at 9:34 AM0comments
တအန်းတပ် ၃၆၇ တပ်ရင်းနှင့် မြန်မာတပ်တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာ အနဲဆုံး ၃ ဦးကျဆုံး
၁၈ ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ နေ့လည် ၁၂း၁၅ နာရီခန့်တွင် TNLA တပ်ရင်း ၃၆၇ ၏ တပ်ခွဲ (၂) နှင့် မြန်မာ ခမရ (၁၇) နှင့် (၁၁၄) စစ်ကြောင်း တို့ မန်တုံမြို့နယ် အရှေ့ဘက် နမ့်ပါကျိုင်ရွာ အနီးတွင် ပက်ပင်းတိုး ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မြန်မာဘက်မှ အနဲဆုံး ၃ ဦး ကျဆုံးပြီး အများအပြား ထိခိုက် ဒါဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြသည်။
တအန်းတပ်ဖွဲ့ဝင် တဦး၏ လက်တွင် လက်နက်ကြီးစ ထိမှန်ပြီး ဒါဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။နှစ်ဘက် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲမှာ ၁၅ မိနစ်ခန့်တာကြာပြီး နှစ်ဘက်စလုံး တပ်ဆုတ်ကာ တိုက်ပွဲ အဆုံးသတ်ခဲ့ကြသည်။
ထိုထိခိုက်ဒါဏရာရရှိသည့် မြန်မာတပ်ဖွဲ့များကို နမ္မတူမြို့ဘက်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်ကြောင်းသည် ထိုတောင်ကြောမှ မန်တုံ-နမ္မတူ ကားလမ်းအနီးသို့ဆုတ်ခွာနေရာယူပြီး တအန်းတပ်ဖွဲ့များ ရှိမည်ဟု ယင်တို့ယူဆသည့် တောင်ကုန်းများဆီသို့ လက်နက်ကြီးများ တနာရီခြား တခါ ပစ်ခတ်နေလျှက်ရှိသည်။
ကျနော်တို့တွေရဲ့ ဘိုးဘွားပိုင် မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတ ခံစားခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ခဲ့ပြီ ..... ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲစေရေး စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ကုန်းအော်နေလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး ... ဘိုးဘွားပိုင် သယံဇာတကို ဌာနေတိုင်းရင်းသား အကြိုးတူ ခံစားစံစားခွင့် ပြန်လည်ပေးသင့်ပါပြီ....
ကချင် ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့ ဝေခါ ကျောက်မျက် မှော် လုပ်ကွက်မှာ ခန့်မှန်းခြေ အလေးချိန် တန် ၅၀ လောက် ရှိတဲ့ ကျောက်စိမ်း တုံးကြီး တစ်တုံးကို တူးဖေါ် တွေ့ရှိခဲ့ ပါတယ်။
တနိုင်တပိုင် ကျောက် တူးဖော်သူ တွေ တူးဖေါ်ရရှိတဲ့ ဒီကျောက်စိမ်း တုံးကြီးဟာ တနိုင်တပိုင် သမားတွေ တွေ့ခဲ့ ဖူးတဲ့ ကျောက်စိမ်းတွေ ထဲမှာ အကြီးဆုံး လို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒီအတုံးကြီးဟာ ကျောက်စိမ်း အရည် အသွေးပါတဲ့ လုံးချော ပုံသဏ္ဍဍန် ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အခုတော့ ဒီကျောက်စိမ်းတုံးကို တွေ့ခဲ့တဲ့ နေရာမှာဘဲ စစ်တပ် အစောင့် အရှောက်နဲ့ အစိုးရက ထိန်းသိမ်း ထားပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 10:01 AM0comments
ဘန်ကောက် သပိတ်စခန်းကို ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ရာက ရဲနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွား
ရဲတစ်ဦး သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ ရဲနဲ့ဆန္ဒပြသူ ၄၀၀န်းကျင်၊ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံထားရသူ တရာကျော်ရှိ။ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ရက်၊ နေ့လည် ၁း၃၀နာရီ)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် ၈၈မျိုးဆက်(ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)မှခေါင်းဆောင်များ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ပူးတွဲဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တွေ့ဆုံစည်းဝေးနေကြစဉ် …. ။
Photo by - The 88 Generation Peace and Open Society.
စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ခြင်း အခန်း ၁၂ပါ ပုဒ်မ ၄၃၆ ဖြစ်သော လွှတ်တော်အမတ်အားလုံး၏ ၇၅%ကျော်ပြင်ဆင်ရန် သဘောတူလက်ခံပြီးနောက် ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် မဲပေးခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ ထက်ဝက်ကျော်ဖြင့် ပြင်ဆင်ရန် အပိုဒ်ခွဲ (က)နှင့် အပိုဒ်ခွဲ (က)တွင် မဖော်ပြထားသော ကျန်ပုဒ်မများကို ပြင်ဆင်ရန် လွှတ်တော်အမတ် အားလုံး၏ ၇၅%ကျော်၏ ထောက်ခံဆန္ဒမဲဖြင့်သာ ပြင်ရမည်ဆိုသည့် အပိုဒ်ခွဲ (ခ)တို့ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်တို့ ပူးတွဲကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၁၆)ရက်။
ချင်းတိုင်းရင်းသားများ အဖွဲ့အစည်း(ဂျပန်) Chin National Community –Japan မှ ဦးစီး၍(၆၆)နှစ် မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကို ယနေ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊တိုကျိုမြို့ နိရှိရှီနာဂါဝ အရပ်ရှိ Shinagawa kuritsu Chushou kigyo Center 3F, တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားကို ညနေ ၆း၀၀ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး မြန်မာ့အရေးကို စိတ်ဝင်စားသော ဂျပန်လူမျိုး ဧည့်သည်တော်များ၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ဧည့်သည်တော်များ ၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများတို့ပါ တက်ရောက် အားပေးခဲ့ကြပြီး ချင်းပြည်နယ်နှင့် ချင်းအမျိုးသားများအတွက် ဆုတောင်းခြင်း အစီအစဉ်ခြင်း အစီအစဉ်နှင့်အတူ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား၊ မိန့်ခွန်းပြောကြားသည့် အစီအစဉ်ပြီးသည့်နောက် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ခေတ်ပေါ်တေးဂီတ နှင့် အကများတို့ဖြင့် တင်ဆက်ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ချင်းရိုးရာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ဖက်ရှင်ပြသခြင်း အစီအစဉ်များကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသည့်နောက် တက်ရောက်လာသော ပရိသတ်များနှင့်အတူ ချင်းရိုးရာ စုပေါင်းအက ပါဝင်ကခဲ့ကြပြီးနောက် ချင်းရိုးရာ အစားအသောက်ဖြင့် ပြန်လည်ဧည့်ခံကာ ည ၉း၀၀ နာရီတွင် အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း။ ။Mai Kyaw Oo
သတင်းမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံကို ၀င်ရောက်ကြည်ရှု့နိုင်ပါသည်
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်း ၇ တိုင်းခေါ်ဗမာပြည်နယ်နှင့် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ မွန်၊ရခိုင် ပြည်နယ်တို့ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
လွတ်လပ်ရေးကို တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ကြိုးပမ်းအားထုတ်၍ အရယူခဲ့ကြသည်။ လွတ်လပ်ရေး ရယူပြီးချိန်မှစ၍ ပြည်ထောင်စုဗဟိုအာဏာကို လူများစုဖြစ်သည့် ဗမာလူမျိုးတို့ အများဆုံး ကိုင်တွယ် ကျင့်သုံးပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်တော့ ပြည်ထောင်စု ဗဟိုအာဏာကို ဗမာပြည်သူတွေပင် လက်မခံသည့် အာဏာရှင်တစ်ဦး (ဝါ) တစ်စုထံ ဆင်းသက် ကျရောက်ခဲ့ရသည်။
လွတ်လပ်ရေးမရမီ အချိန်ကာလက တောင်တန်းဒေသသည် မြန်မာပြည်၏ အစိတ်အပိုင်း မဟုတ်ခဲ့ပါ။ မြန်မာသမိုင်းအရ ရှေးအခါ ပုဂံမင်းနိုင်ငံ၊ အင်းဝမင်းနိုင်ငံ၊ စသည် မင်းနိုင်ငံများသာရှိ၍ မြန်မာနိုင်ငံ Burma ဟူ၍မရှိခဲ့ချေ။ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းအကြီးအကဲများသည် ယင်း မင်းနိုင်ငံ မြန်မာဘုရင်များ၏ သြဇာခံများသာ ဖြစ်ခဲ့ကြသော သီးခြား ကင်းလွတ်သည့် နယ်မြေဒေသများဖြစ်သည်။ အချုပ်အခြာ အာဏာ လုံးဝမဆုံးရှုံးပဲ ပဏ္ဏာသ ဒေသများသာ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
၁၈၈၅ ခုနှစ် သီပေါဘုရင် ပါတော်မူ၍ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို သိမ်းပိုက်ကြောင်း အင်္ဂလိပ်ဘုရင်မ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် မြန်မာပြည် Burma ဟူ၍ မဖော်ပြခဲ့။ ယခင် သီပေါမင်း အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဒေသများဟူ၍ ကွဲပြားစွာ ရေးသားသုံးနှုန်းခဲ့သည်။
၁၉၃၅ ခုနှစ် အောက်မြန်မာပြည် အက်ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့်အခါမှသာ မြန်မာနိုင်ငံ Burma ဟု တိတိကျကျ သုံးစွဲလာသည်။ မြန်မာဘုရင် တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သော နယ်မြေနှင့် သွယ်ဝိုက်၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော နယ်မြေဟုကွဲပြားလာသည်။ ထိုသွယ်ဝိုက်၍ အုပ်ချုပ်သော နယ်မြေများသည် မြန်မာဘုရင်၏ သြဇာခံမျှသာဖြစ်၍ အချုပ်အခြာ လုံးဝလက်မလွတ်သေးသော ဒေသများဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်လက်အောက်တွင်လည်း ၎င်းနယ်မြေများကို သွယ်ဝိုက်အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်အရသာ အုပ်ချုပ်သည်။ ထိုကြောင့်လည်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို လွတ်လပ်ရေးပေးရန်အတွက် မြန်မာပြည်မကို စက္ကူဖြူစီမံကိန်း White Paper အရ၎င်း၊ တောင်တန်းဒေသများကို တောင်တန်းဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ Frontier Area' Administration ဖြင့်၎င်း၊ သီးခြား အုပ်ချုပ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ထိုအချိန်တွင် မြန်မာပြည်မနှင့် တောင်တန်းဒေသများသည် တသီးတခြား ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပေသည်။ အချို့မြန်မာ ခေါင်းဆောင်များ (အာဏာရှင်ဆန်ချင်သူ)က ရှမ်း၊ကချင်၊ချင်း စသောတောင်တန်းသားတို့သည် ၎င်းတို့ပေးမှ လွတ်လပ်ရေး ရမည့်သဘောများရှိနေကြောင်း တွေ့နေရပေသည်။
အမှန်မှာ ပြည်နယ်များသည် မြန်မာကပေး၍ ရသည့်ပြည်နယ်များမဟုတ်ကြပါ။ သမိုင်းဆိုသည်မှာလည်း ဖုံးဖိနိုင်ရုံမျှဖြင့် မကွယ်ပျောက်နိုင်ပါ။
Sai Myo Zin(FB) သတင်းစာမျက်နှာမှ
(၆၇)ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား တိုကျို။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၉)ရက်။
(၆၇)ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို တိုကျို Toshima-ku,Ikebukuro အရပ်ရှိ အကယ်ဒမီ Hall မှာညနေ ၁း၃၀ နာရီ မှ ၅း၃၀ အထိ ဂျပန်နိူင်ငံရောက် ပုညဂါရီမွန်အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ဦးစီးကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့ မွန်ရိုးရာအစားအစာများ စုံလင်စွာ ကျွေးမွေးဧည့်ခံခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Feb 7- 2014 ဗမာအစိုးရတပ် မှ KIA တပ်ရင်း(၁၂)နယ်မြေ နန်ဂေါင်ကျေးရွာအား ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်မှု တိုက်ပွဲမှတ်တမ်း
အကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်း တွေ့ဆုံနေကြတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာ စရွက်ပေါ်မှာပဲလားဗျား.....
Posted by PNSjapan at 10:06 AM0comments
ကျမ ကြက်ဆူပင်လဲ မစိုက်ဖူးဘူး။
ဘယ်အိမ်ကိုမှ ဘူဒိုဇာနဲ့ ထိုးမဖျက်ခဲ့ဖူးဘူး။
ဆုတံဆိပ်တွေ ကျမ မရခဲ့ဖူးဘူး။
ကျမကိုယ်မှာ ဘာဒါဏ်ရာမှ မရှိခဲ့ဖူးဘူး။
သေနတ်ဒါဏ်ရာ ၁၃ ချက်ရှိတယ်။
လွတ်လပ်ရေးအတွက် မှန်ခဲ့တဲ့ ကျည်ဆန်တွေလေ။
ကျမလို အဖမဲ့ဘ၀ ရှင်နေဖူးလား
ကျမလို နိုင်ငံနဲ့အဝေးမှာ အနှင်ခံဘ၀နဲ့
ကျမလို မိသားစုနဲ့ခွဲပြီး ရှင်နေခဲ့ဖူးလား။
ဘာလက်နက်မှ မပါဘဲ ရှင်နေခဲ့ဖူးလား။
လက်ထဲမှာ သေနတ်ကိုင်လို့ သေနတ်မှန်တာဆန်းသလား။
ကမ္ဘာကပေးတာ အာဏာရှင်က ပေးတာမဟုတ်ဖူး။
ကိုယ်ချင်းစာတံတားခင်းလို့ ရခဲ့တာပါ ။
Kyaw Swar Myint(FB)သတင်းစာမျက်နှာမှ
ကြံ့ဖွတ်ပါတီရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ ပြောစကား
နိုင်ငံခြား သတင်းသမား ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ပြန်ကန့်သတ်ပြီ
မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် အတွက် ရန်ကုန်တွင် သတင်းသမား ဇန်န၀ါရီလဆန်းပိုင်းက ဆန္ဒပြကြစဉ်
(ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော် / ဧရာဝတီ)
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များ မြန်မာပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ထုတ်ပေးရာတွင် ကန့်သတ် ပိတ်ပင်မှုများ ပြုလုပ်လာခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနများမှ နိုင်ငံခြား သတင်း ထောက် တချို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာနေရပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အစိုးရသည် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များအတွက် ပြည်ဝင်ခွင့် အများဆုံး ၆ လအထိ ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အပြင် ဗီဇာသက်တမ်း တိုးခြင်းကို ရန်ကုန်မြို့တွင်ပင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရာမှ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းမှစတင်၍ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ မူဝါဒကို ရုတ်တရက် တစုံတရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမပြုဘဲ ပြောင်းလဲ ကန့်သတ်မှုများပြု လုပ်လာကြောင်း၊ အစိုးရ၏ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ကန့်သတ်လိုက်မှုကြောင့် နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များသည် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ၂ ပတ်သာရရှိမည် ဖြစ်ပြီး ဗီဇာ သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုလည်း ပြည်တွင်းတွင် ဆောင်ရွက်ခွင့်မပြုတော့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခင် စစ်အစိုးရသည် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ အထူးကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်နေပါသည်ဆိုသော သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည်လည်း ယခင် စစ်အစိုးရ နည်းလမ်းများ ပြန်လည် ကျင့်သုံးလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု သတင်းမီဒီယာအသိုင်းအ၀ိုင်းက သုံးသပ်ကြပြီး ယင်းသို့ဗီဇာ ကန့်သတ်မှုတွင် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ပြောင်းလဲလိုက်သော မူဝါဒများကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သမ္မတ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ် ၊ ပြန်ကြားရေး ဒုတိယ၀န်ကြီး လည်းဖြစ်သူ
စစ်အစိုးရလက်ထက် နာမည်ဆိုး အထွက်ဆုံး ဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့သူ ဦးအောင်သောင်း
(သရုပ်ဖော်ပုံ – စိုင်းစိုးကြည် / ဧရာဝတီ)
ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံစာရင်းဝင် သွားသည်နှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးညီစွာ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့သူများတွင် ခရိုနီများနှင့်အတူ ဝန်ကြီးဟောင်း၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများလည်း ပါဝင်သည်။
ဦးအောင်သောင်း တန်ခိုးထွားစဉ်ကဆိုလျှင် ပရောဂျက်တခု ရရှိရေးအတွက် လာဘ်ငွေကို သူ့ကို သာမကသူ၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိ နှစ်ဦးကိုပါ ပေးရသည်ဟု ကိုယ်တိုင်ကြုံရသည့် စီးပွားရေးသမားများက ပြောကြသည်။ ကြီးမားသော စက်ရုံကြီးတခု ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရေးအတွက် ဦးအောင်သောင်း၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိနှစ်ဦးကို သိန်း ၄ ထောင် လာဘ်ထိုးခဲ့ရသည်ဟု စီးပွားရေးသမား တဦးကဆိုသည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ မလုပ်လိုဘဲ လမ်းရိုးလမ်းစဉ်အတိုင်း စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း တောင်းခံသူများကိုမူ
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့နယ်ခွဲ ဂျာအင်ယန်ကျေးရွာအနီးမှာ အစိုးရတပ်နဲ့ ကေအိုင်အေတပ်တွေအကြား ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး KIA တပ်ရင်း ၁၈ ရဲ့ ခါအူ ရှေ့တန်းတပ်စခန်းကို အစိုးရတပ်တွေက သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီ ဂျာအင်ယန်ကျေးရွာအနီးမှာ ဒီနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲအကြောင်း မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဋ္ဌာနချုပ်နဲ့ မြန်မာငြိမ်းချမ်း...
ရေးစင်တာ MPC က တာဝန်ရှိသူတွေကို အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အခြေအနေ ပိုတင်းမာလာနိုင်ကြောင်း မြစ်ကြီးနားမြို့အခြေစိုက် ကေအိုင်အို နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဒေါင်ခါးက ပြောပါတယ်။
“ခမရ ၁၆၁ နဲ့ ခမရ ၄၂ တပ်ရင်းနှစ်ရင်းက အင်အားနှစ်ကြောင်းနဲ့ လာတိုက်တော့ ကျနော်တို့ဘက်ကနေ ဖယ်သိမ်းလိုက်ပြီ၊ ဒီအကြောင်းကို ကျနော်တို့ MPC ကိုလည်း သတင်းပို့ထားပြီ၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်းကိုလည်း သတင်းပို့ထားတယ်၊ အခြေအနေက ပိုပြီးတော့ တင်းမာလာနိုင်ခြေရှိတယ်၊ ဒီလိုမျိုး ပြည်ထောင်စုနေ့
မြန်မာအစိုးရနဲ့ ထိုင်းအစိုးရတို့ ကျူးကျော်နေထိုင်ရတဲ့ မိသားစုတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့ပုံစလေး နှိုင်းယဉ်ထားတဲ့ သုံသပ်ချက်ပါ....
ထိုင်းတနိုင်ငံလုံးရဲ့ ရထားဘူတာအနီးနား ရထားသံလမ်းနံဘေးတွေမှာ မြို့ကြီးပြကြီးတိုင်းလိုလို ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ရှိတယ် ဘန်ကောက်ကို တခြားနယ်တွေမှရထားစီးပြီးလာရင် ဟွာလန်ဖုံဘူတာနား ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ရထားသံလမ်းနဘေးမှာ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်တွေကို မြင်ရမှာဖြစ်တယ်....
ထိုင်းအစိုးရအဆက်ဆက်မှာ သူ့လူမျိုးတွေရဲ့ အိမ်မြေပိုင်မရှိဘဝတွေ... ကျူးကျော်နေထိုင်ရတဲ့ မိသားစုတွေကို နည်းမျိုးစုံ...နဲ့ ဖြေရှင်းပေးနေပါတယ်....ဘန်းအူးဟအာထွန်(บ้านเอื้ออาทร) တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေ ဆောက်လုပ်ပေး နှစ်(၂၀)အထိအချိန်ပေး လစဉ်အရစ်ကျသွင်းစံနစ်နဲ့ လူတိုင်းကို ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရှိလာအောင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြေရှင်းပေးနေပါတယ်.....
တခေတ်တခါကမှ ကျူးကျော်တွေကို မြန်မာပြည်က ခွေးတိရိစ္ဆာန်ထက်ယုတ်ညံ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေလို ဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုဖျက်ပြီး နှင်မထုတ်ပါ.... သူတို့ ဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုဖျက်ပြီး နှင်ထုတ်တာမျိုးရှိတယ်...ဆင်းရဲသားတွေကို မဟုတ်ပါ...ငွေရှင်ကြေးရှင်တွေ ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်နဲ့ဂွင်ရိုက်ပြီး သဘာဝဘေးမဲ့တောကို ကျူးကျော် Resort တွေဝင်ဆောက်ထားတာမျိုးကို သစ်တောဋ္ဌာန၊စစ်တပ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဥပဒေနဲ့အပြတ်ကိုင်တာ..ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့....နောက်တမျိုးက တိုင်းတပါးသားလို့သတ်မှတ်သူတွေကို ထိုင်းမြေကြီးပေါ်မှာ အိမ်ဆောက်/ရွာတည်ပြီး နေထိုင်ခွင့်မပေးပါ..ချက်ချင်း စစ်တပ်မှလာဖျက်ပါတယ်...
ဥပမာ ၎င်းတိုမှ ထိုင်းနိုင်ငံသားအဖြစ်လက်မခံ လာအိုနိုင်ငံသားဟုသာသတ်မှတ်ထားတဲ့(မြန်မာမှာဆို ရခိုင်ပြည်နယ်မှဘင်္ဂလီတွေလို) မုံးလူမျိုးတွေ ရွာတည်ပြီးနေထိုင်တာ ချက်ချင်းဖျက်ခိုင်းပါတယ်....
မြန်မာပြည်မှာတော့ ထိုင်းနဲ့ပြောင်းပြန်ပါ......လက်ရှိ သမီးကလေးကျေးရွာအပါဝင် ယခင်အချိန်က ကျူးကျော်ဟုအမည်တပ် ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အိမ်ယာတွေကို မြင်မိပြီး...လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ မြန်မာလူမျိုးမှ ဟုတ်ပါရဲ့လား...လူမှဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ထင်မြင်မိပါတယ်....
Boon Myo Myo(FB) သတင်းစာမျက်နှာမှ
UWSA ဌာနချုပ်တည်ရှိရာ ပန်ဆန်းမြို့သို့ မကြာသေးမီက သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့၏ အဆိုအရ UWSA သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် လေယာဉ်မောင်းသင်တန်း တက်ရောက်မည့် စစ်သည် ၃၀ ဦး ရွေးချယ်ထားပြီး ဖြစ်သည်ဟု UWSAမှ အရာရှိများက ပြောဆိုကြကြောင်း သိရှိရသည်။
“သူတို့ (UWSA အရာရှိ) ပြောတာက တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရဟတ်ယာဉ် မောင်းသင်ဖို့ သင်တန်းသား ၃၀ ရွေးထားပြီးပြီ လို့ ပြောတယ်။ ဘာကြောင့် သင်ခိုင်းတာလဲဆိုတာ မပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဆီမှာ ကြီးမားတဲ့ စစ်ရေး ရည်ရွယ်ချက် ရှိမယ်လို့တော့ ကျနော်ထင်တယ်” ဟု ပန်ဆန်းမြို့သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့သော ကရင် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(KNLA)မှ အမည်မဖော်လိုသော
(၆၇)နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့သော်လည်း စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကို မထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး
တောင်းတန်းပြည်မ သွေးစည်းရေး၊ တန်းတူရေး ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်ရေးအတွက် ဘ၀နဲ့ရင်ပြီး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ ပင်လုံမျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလဲ တယောက်ပြီးတယောက်
ယနေ့ ကျရောက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အနာဂတ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးမှာ ကျနော်တို့မျိုးဆက်လူငယ်တွေ အသိစိတ်နဲ့ သမိုင်းပေးလက်ဆင့်ကမ်း ပုခုံးပြောင်းတာဝန်တွေကို ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူပြီးပါက နိုင်ငံသားကတ်ပြားတွင် လူမျိုး၊ ဘာသာတို့ မထည့်သွင်းပဲ ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားဟုဆို
မတ်လတွင် ကောက်ယူတော့မည့် ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်းများ ကောက်ယူပြီးပါက နိုင်ငံသား ကတ်ပြားလုပ်ရာတွင် လက်ရှိထည့်သွင်းထားသည့် လူမျိုးနှင့် ဘာသာဟူသည်ကို မထည့်သွင်းတော့ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ဟု ဖေဖော်ဝါရီ ၁ဝ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြောကြားလိုက်သည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ သုဝဏ္ဏ မိုးလုံလေလုံ အားကစားကွင်တွင် ကျင်းပသည့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပွဲတွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခြင်းဖြစ်သည်။
“အခု သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ပြီးသွားရင် လက်ရှိ ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ ဘာသာ၊ လူမျိုးကိစ္စတွေ နည်းသွားအောင် မှတ်ပုံတင်မှာ အားလုံး မြန်မာပေါ့။ ဘာသာ၊ လူမျိုးဆိုတာတွေကို ထည့်မလုပ်အောင်
KIA တပ်ရင်း ၁၂ နှင့် အစိုးရတပ်ကြား ဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲတွင် KIA အရာရှိ ၂ ဦးကျ
ထို့ပြင် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မန်တုံမြို့နယ် KIA တပ်ရင်း ၃၄ ဒေသတွင် လားရှိုးဘက်မှ အစိုးရတပ်များသည် ဖေဖ၀ါရီလ ၈-၉ ရက်အတွင်း အင်အားများတိုးချဲ့လာနေဆဲဖြစ်ပြီး နမ်ဆန်ဘက်မှလည်း ဟူခင်မန်ဂျက်၊ ထတ်ဂျက်နှင့် ပန်ဆွေ၊ နမ်လန်း KIA နေရာ ၃ ခုတွင် စစ်အင်အား
Posted by PNSjapan at 2:25 AM0comments
၁။ UNFC ရော UNFC မဟုတ်တဲ့ RCSS နဲ့ UWSA တို့ပါ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်တစ်ခု ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ KIA နဲ့ TNLA တို့ကို ဒီအတိုင်း ပစ်ထားလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါ။ ဒီဒေသမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွက် သိန်းစိန်အစိုးရကနေတစ်ဆင့် ဖိအားတစ်စုံတစ်ရာ မပေးဘဲ နေခြင်းမှာ နည်းနည်းလေး မှားနေတယ်။
၂။ ဒီအစိုးရဟာ သိက္ခာကို စောင့်ထိန်းတဲ့ အစိုးရ မဟုတ်ဘူး။ စာနာတတ်တဲ့ အစိုးရ မဟုတ်ဘူး။ အလျှော့ပေးလွန်းရင် သူတို့က အားနာရကောင်းမှန်းမသိ ရှေ့တိုးလာမှာ ဖြစ်တယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးမှာ ဒါဟာ သက်သေ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ပင်လုံပါ အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုကြရင် အဲဒါကို မပေးဘူး။ တောင်းသလို ပေးလိုက်ရင် သူတို့ဘက်က ရှုံးတယ်လို့ ဒီစိတ္တဇအစိုးရက မှတ်ယူလေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် သီးခြားပြည်ထောင်စုကို ထူထောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ မူကို ချမှတ်ထားမှ ဖက်ဒရယ်လောက် ရမှာ ဖြစ်တယ်။
၃။ UNFC က စစ်အစိုးရက စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို မဆိုင်းငံ့မချင်း နောက်ထပ်အပစ်ရပ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကို လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တရားဝင်ကျေညာချက်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ထုတ်ပြန်သင့်တယ်။
Written By -Ven Ravika
Posted by PNSjapan at 2:23 AM0comments
ကေအိုင်အေ ဌာနချုပ် လိုင်ဇာ အနီး တိုက်ပွဲအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေ
ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၀)ရက် မနက်ပိုင်း (၉း၀၀)နာရီ အချိန်ခန့် မှစ၍ နန်ဆန်ယန်ကျေးရွာ အထက် နန့် ဆန် ချောင်းဖျား ဂျာအိန်ယန်ကျေးရွာ အနီးပါတ်ဝန်းကျင်တွင် ယခုသတင်းရေးသားနေချိန် ညနေပိုင်း အချိန်ထိတိုင်အောင် နှစ်ဖက်တပ်များ တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရသည်။
ကေအိုင်အေတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ စခန်းထိုင်နေရာ ဂျာအိန်ယန်ကျေးရွာ အား မြန်မာအစိုးရတပ်များ အင်အားအလုံးအရင်း ဖြင့် ၀န်းရံကာ တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပြီး နှစ်ဖက်တပ်များ ထိခိုက် ကျဆုံးမှု အား မသိရသေးပါ ။
post by Myu Tsaw kasa
၆၇ နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား (တိုကျို - ဂျပန်)
ရုပ်သံမှတ်တမ်းအတွက် Ko Zay Yar အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိတယ်။
Posted by PNSjapan at 5:49 PM0comments
“တအန်း(ပလောင်) ဒေသနှင့် လူထုအား ဆက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်နေသည့် မြန်မာအစိုးရ၏ စစ်ဆင်ရေးကို အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း”
၁၀ ရက်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်။ ထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်။ ။ ဝဝ၄§၀၅§ဌနခ-၁၄
၁။ တအန်း(ပလောင်)ဒေသတွင် ဆက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေခြင်းနှင့် ဒေသခံလူထုအား ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ပေါ်တာဆွဲခြင်း၊ မိုင်းရှင်းခိုင်းခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာများ အတင်း အဓမ္မသိမ်းဆည်းယူငင်ခြင်း၊ လူနေကျေးရွာသို့ဦးတည်ပြီး လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခြင်း အစရှိသည့် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုများ ကျူးလွန်နေသည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာအစိုးရနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ပြည်တွင်းရှိ တအန်း(ပလောင်)တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုအပေါ် စစ်ဆင်ရေးကို ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး P.S.L.F/T.N.L.A မှ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက် ရှုတ်ချလိုက်ပါသည်။
၂။ ယခု ၂၀၁၄ ခုနှစ် တလကျော် ကာလတိုအတွင်းတွင်ပင် တအန်းတပ်မတော်နှင့် မြန်မာတပ်မတော်တို့ ထိတွေ့မှု တိုက်ပွဲ အကြိမ် (၃၀) ကျော်ရှိပြီး၊ မြန်မာစစ်ကြောင်းများမှာလည်း တအန်းကျေးရွာဒေသများသို့ ပိုမိုကြမ်းတမ်းစွာ လှုပ်ရှားလာကြပါသည်။ ၁၇ ရက် ဇန်နဝါရီလတွင် နမ့်ဆန်မြို့နယ် ဟိုမိန်းရွာသားများအား ဖမ်းဆီးနှိက်စက်ပြီး ပစ္စည်းနှင့် ငွေ စုစုပေါင် ၃၀ သိန်း အဓမ္မယူငင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် မန်မိုင်မိန်းကွမ်၊ ရူမန်း၊ ဘန်လူမ် အစရှိသော ရွာ များတွင်လည်း ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုလည်း ရောက်လေရာရွာတိုင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှူးများ၊ ရဟန်းသံဃာများအား ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခြင်း၊
Posted by PNSjapan at 4:37 PM0comments
(၂၁)ကြိမ်မြောက် သျှမ်းပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ အခမ်းအနားကို တိုကျိုတွင် ကျင်းပပြုလုပ်။
(၂၁)ကြိမ်မြောက် သျှမ်းပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ အခမ်းအနားကို တိုကျို Toshima-ku,Ikebukuro အရပ်ရှိ အကယ်ဒမီ Hall မှာညနေ ၅း၃၀ နာရီ မှ ၉း၀၀ အထိ ဂျပန်နိူင်ငံရောက် သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့မှ ဦးစီးကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သျှမ်းပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ အစီအစဉ်ကို သျှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (ဂျပန်)မှ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပပြုလုပ် လာခဲ့သည်မှာ ယခုနှစ်ဆိုလျှင် (၂၁)နှစ်မြောက် ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားတွင် သျှမ်းအိုးစည် ဗုံမောင်းများ၊ သျှမ်းရိုးရာအကများဖြင့် ဧည့်ခံဖျော်ဖြေ သွားခဲ့ကြပြီးသျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့မှ သျှမ်းရိုးရာ အစားအစာများ စုံလင်စွာ ကျွေးမွေးဧည့်ခံခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။